भोलि डा. जागेश्वर गौतमले पनि अस्पतालमा बेड नपाउन सक्छ – Health Post Nepal
२०७७ असोज २२ गते १५:०२
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवत्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार फेरि भने, ‘सास फेर्न गाह्रो भयो अनि बेहोस हुने जस्तो भयो भनेमात्रै अस्पताल जानू।’
पटक-पटक सकभर अस्पताल नजाउनु भन्दै आएका उनको यो पछिल्लो ‘आग्रह’को निकै आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सन्जालमा ट्रोल नै बनाइएको छ।
यसबारेमा हेल्थपोस्ट नेपालका पुष्पराज चौलागाई‌ंले डा.गौतमसँग केही प्रश्नहरू सोधेका छन्-
हिजो तपाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना अपटेडमार्फत बेहोस हुन थालेमा वा समस्या परेपछि मात्र अस्पताल जानु भन्नुभयो। सबैतिर यसको विरोध भइरहेको छ। यसमा तपाईंको तर्क के हो?
मैले रुघाखोकी मात्रै लागेको छ भने अस्पताल नजानुहोस् भनेको हुँ। किनभने, अस्पतालमा बेड उपलब्ध छैनन्। त्यहाँ जाँदा झन मानिस बिरामी पर्ने अवस्था आउँछ। खानाबस्न पनि समस्या छ।
अनुसन्धानहरूले ठूलो समस्या नपरी होम आइसोलेसनमा बस्दा रिकभरी पनि छिटो भएको र मृत्यु पनि कम भएको पेपर प्रकाशित भएका छन्। मैले विज्ञानको आधारमा भनेको हुँ।
नेपालमा विज्ञान पढेको मानिसहरू कति छन्? विज्ञान जसले धेरै जानेका छन्, त्यसले धेरै कमेन्ट गर्दैन। केही आधार देखेर बोल्यो भन्ने ठान्छ। आफूले पनि अध्ययन गर्छ। पढेलेखेका मान्छले गुगलमा गएर होम आइसोलेसन गर्न र अस्पताल आइसोलेसन गर्नको भिन्नता चाहेमा हजारौं आर्टिकल छन्।
हामीले नै अध्ययन गरेर भन्ने हो नि। साइन्टिफिक जर्नलमा प्रकाशित भएका आधार बोल्ने हो।
संस्कृत पढ्न नजानेको मानिसले कहाँ संस्कृत पढ्न सक्छ।
उसो भए, बिरामीले मृत्यु हुन लागेपछि मात्र अस्पताल जानुपर्ने हो? सरकारले संक्रमित व्यक्तिमा ठूलो समस्या आएपछि तुरुन्तै अस्पताल पु-याउने व्यवस्था गर्न सक्छ? भोलि बिरामीको ज्यान तलमाथि भए सरकारले त्यसको जवाफ दिन्छ त?
हिजोसम्म सरकारले सेवासुविधा दिन सकेको थिएन र? हिजोसम्म सक्ने र डाक्टर जागेश्वर गौतमले बोलेपछि नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ र?
मैले राम्रोसँग बुझेको छु। मैले बुझेको एउटै कुरा छ, नेपालमा आजका दिनसम्म पनि मानिसले कुरा बुझ्न चाहेका छैनन्। के कुरा बुझ्न चाहेका छैनन् भने यो कोरोना भाइरसविरुद्ध सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ। त्यसमा सरकारको पक्ष, विपक्ष, नागरिक समाज, जनता तथा सञ्चारमाध्यम सबै मिलेर लड्नुपर्ने हो।
अहिले पनि मानिसलाई एकअर्काबीच लडाइँ नै चलिरहेको छ। कोरोनालाई हराएपछि कसले कति राम्रो काम गर्यो, त्यसपछि विश्लेषण गरौंला नि।
अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिड गरिरहेको छ। ती कुरा सबैले फलो गर्दै जाउँ। स-साना कुरामा छिर्के दाउ खोजेर बोल्नुपर्ने के अवस्था छ?
बाँचेपछि कुरा गरौंला नि। माइतीघर मण्डलामा जुलुस गर्न जाने, एक मिटरको दुरी छ? मास्क लगाएका छौं? भनेको थिएँ। अहिले काठमाडौंमा कति संक्रमण फैलाए। हिजो बालुवाटारमा धर्ना दिनेले त्यसै भनेका थिए। अहिले महारागन्जतिर आन्दोलन भनेर डाक्टरहरू पनि भीड गरिहेका छन्।
यस्ता कुराले फरक पार्छ अनि पारिसकेपछि कुरा गरेर हुन्छ कि पार्नुभन्दा अगाडि कुरा गर्नुपर्छ।
यो एटिच्युड, ज्ञानको समस्या हो। दुई महिना नलेखेर के हुन्छ? नेगेटिभ नै लेख्न कमेन्ट गर्नुपर्ने?
केही दिनअघि एक बेबकुफले भन्दै हिँडेका थिए- कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठनले व्यापारका लागि उब्जाएको रोग हो। ती व्यक्तिले मलाई जवाफ दिन सक्छन्, हाम्रो ५ सयभन्दा बढी होनहार नेपालीको मृत्यु किन भएको हो? भनेर।
मेरो साथीको मृत्यु भएको छ। अहिले कतिजना डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको मृत्युशय्यामा संघर्ष गरिरहेका छन्। ती कुराको जवाफ दिन सक्छन्? जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिँड्ने? त्यस्ता कुराको तपाईं हामीले जवाफ दिनुपर्ने? म यस्ता कुराको जवाफ दिन्नँ।
यी कुरा त बाँचेपछि गरौंला नि। बचाउनका लागि जे-जे काम गर्नुपर्छ गरौं न पहिले।
मानिसको जीवन बचाउन भनिएको हो। मानिसलाई के लागेको छ भने खोकी लागे पनि अस्पताल गइरहेको छ। खोकी लागेको मानिस किन अस्पताल जानुपर्छ? घरमा बसेर आराम गरेर तातोपानी खाए दुई-चार दिनमा निको हुन्छ। खोकी त रोग होइन। ज्वरो आएका मानिसहरू प्यारासिटामोल खाएर बसे भयो। किन अहिले अस्पताल धाउनुपर्‍यो?
जो मानिस निदाएका छन् त्यस्तालाई ब्युँझाउन कोसिस गरेको हुँ। जो निदाएको नक्कल गरेका छन्, उनीहरूलाई म ब्युँझाउन सक्दिनँ। उठेर फेरि नेगेटिभ कुरा गरिहाल्छन् त्यस्ता व्यक्तिले।
किनभने, त्यस्ता व्यक्तिलाई को मानिसको मृत्यु भयोसँग कुनै सरोकार छैन। उसको घरमै मृत्यु नभएसम्म चेत आउँदैन। सरकारले त्यसो गर्न मिल्दैन नि।
सरकारले अधिकांश जनतालाई कसो गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर बोल्न प-यो नि।
मैले भनेको कुरा गल्ती नै भएछ भने पनि पहिला बाँचौं अनि छलफल गरौंला।
त्यसमा कति गल्ती डा. जागेश्वर गौतम, रामे वा श्यामेको कति गल्ती विश्लेषण गरौंला नि।
तर, अहिले बाँचेर काम गरौं भनेको हुँ मैले।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा स्रोतसाधनले धान्दैन भन्दै आएको छ। बुधबारबाट संक्रिय संक्रमित पनि २५ हजार नाघेको छ। के अब सरकारले त्यसभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने हो?
२५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए। हामीले विश्लेषण गरेका छौं। सबै देश त लकडाउन हुँदैन। एक ठाउँमा बिरामी छ, अर्को ठाउँमा लकडाउन गर्नुको केही अर्थ छैन। म पहिलादेखि तराईका सबै बोर्डर सिल गरेर, विदेशबाट आउने मानिसलाई राम्रोसँग क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने लकडाउन नै गर्नुपर्दैन कि भन्ने मत राख्ने मान्छे हुँ।
लकडाउन नगरेर संक्रमण नियन्त्रणमा राखेका देशहरू पनि छन्। तर, उनीहरूले विदेशबाट आउने मानिसमा कडाइ गरेका थिए।
हाम्रो त गरिब देश हो। कमाउन गएका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी फर्किन चाहेपछि प्रेसर थाम्न हामीले ल्याउनुपर्‍यो।
लकडाउनले भइरहेको केसलाई अलि पछि सार्न सक्छ। ताकि त्यस्तो गर्दा अहिले भएका मानिस डिस्चार्ज हुन्छन्। नयाँ बिरामी पर्नेले बेड पाउँछन्। त्यो आधारले भनिएको हो। अहिलेसम्म बेड नै नपाउने अवस्था नआएको हुनाले हामीले लकडाउन नै गरिहालेको छैन। त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।
बेडले पुग्दै पुगेन। सुताउने ठाउँ नै भएन भने त्यसपछि विकल्प सोचिन्छ।
मास्क नलाएर, भौतिक दुरी कायम नगरेर भएको यही हो। दिनको १५ हजार सरकारले तिर्दै आएको छ। आफू चाहिँ एउटा मास्क पनि नलगाउने र दुई मिटर दुरी कायम पनि नगर्ने? अनि सरकारले गरेन भनेर भन्दै हिँड्ने। हुन त सरकारले तिर्ने पैसा पनि सरकारको नै हो। त्यही पनि अनाश्यक रूपमा वालुवामा पानी हाल्न त भएन।
यो रोग कुनै ठूलो समस्या छैन। मान्छेले नबुझेर मात्र अप्ठेरो परेको हो। हामीले बुझाउने काम गर्नुपर्छ। दुई मिटर दुरी कायम गर्न सकेर मास्क राम्रोसँग लगाए कोरोना सर्दैन।
उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन विकल्पका रूपमा लिइएको छ। के अब लकडाउन हुन्छ त?
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले भइरहेको रणनीति प्रयोग हुन्छ। अहिले जे गरिरहेका छौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो। कुनै छुट्टै कुरा छ र संसारमा?
कोरोनाको कुनै खोप तथा औषधी आएको छ? मानिसलाई रोगबाट बच्न होसियार हुनुहोस् भन्ने नै हो।
जथाभावी गरेर संक्रमण भए ती मानिसलाई अस्पताल लगेर सपोर्टिभ उपचार गर्ने हो।
अहिले भर्ना भएका बिरामी भर्ना हुने बाँच्ने। अनि हामी पछि बिरामी पर्ने मर्ने हो।
अस्पतालका सबै बेडले धानेन भने सात–१० दिनपछि बिरामी प-यौं भने हामी मर्नुपर्ने भयो। अरू के नै उपाय छ र?
डा. जागेश्वर गौतमले नै बेड पाउँदैन। भोलि लकडाउनको विषयमा हामीले अध्ययन गरिहेका छौं।
बेड पाउन्जेलसम्म हामी लकडाउन गर्दैनौं।
खोकी लागेका मानिस नै अस्पतालमा बस्न थाले भने बेड पाइँदैन।
पहिला-पहिला केही समस्या नभएका तर संक्रमण पुष्टि भएका लगेर राखेका थियौं। त्यसपछि होम आइसोलेसनको व्यवस्था भएपछि केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ।
स-साना समस्या भएका मानिस नै घरमा बसेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुस् भनेको हुँ। त्यस्तो गरे अस्पतालको बेड पुग्ला अनि लकडाउन गर्नु नपर्ला।